Antoko politika iray ao Antsirabe mihevitra ny mahaolona ny "Finoana Arahina Asa" na FIASA. Raha ara-tantara dia niorina tamin'ny taona 1998 ny fikambanana antsoina hoe Miara-Mizotra (MIAMI) hahabe voa ny fanabeazana teo amin'ny fiaraha-monina ary nandray anjara betsaka tamin'izany sehatra izany ireo olom-boafidy ao amin'ny antenimieram-pirenena, ny kaominina sy ny vondrom-paritra. Folo taona taty aoriana, nihevitra ny MIAMI fa tsara raha sarahina ny mahakasika ny raharaham-piaraha-monina sy ny raharaham-pirenena ka teraka tamin'ny taona 2008 ny FIASA izay manana ny foibeny ao Antsirabe fa manana rantsana manerana ny Nosy kosa.
Nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ity antoko ity, miaraka amin'ny fikambanan'ny Ben'ny tanàna amin'ny faritry Vakinankaratra, fa hanohana an'Andrianainarivelo Hajo amin'ny fifidianana manaraka izao. Resy lahatra manokana ny FIASA fa ity kandidà ity no manana fandaharan'asa matotra ka afaka hampandroso an'i Madagasikara. "Asa mankadiry ny fanaovana politika ka mila mitovy fiasa sy fomba fihetsika ny rehetra raha toa ka tanjona iray no kendrena ho an'ny firenena. Tohananay io kandida io satria mendri-pitokisana ary maharesy lahatra anay ny vinany anaty dimy taona izay mifandray amin'ny vinam-piaraha-monina ifotoran'ny FIASA", hoy ny Me Razafimahatratra Valisoa, filoha nasionalin'ny FIASA. NA eo aza ny finiavana tia hanamafy ny resaka politika dia mametrak hatrany ny "fanabeazana olom-pirenena vanona" ho laharam-pahamehana hatrany ny FIASA.
Ankoatra izay, mirona amin'ny asa sosialy ihany koa ny fikambanana ka manao ny ainy tsy ho zavatra hahafahan'ny tanora mivelatra. Misahana fampiofanana ho an'ireto farany momba ny fanodinana ronono, hena ary voankazo ny FIASA. Tanjona amin'izany ny fahaleovan-tena eo amin'ny asa. Mahatratra 50 eo ho eo no efa nahazo tombon-tsoa. Tsy misy ny saram-piofanana lafo fa fandraisana anjara Ar 1000 no aloan'izay tia handranto fahalalana. Misy koa ny famolavolana boky kely ho an'ny mpianatra hanala fanadinana bakalorea hanampiana azy ireo amin'ny fiatrehana izany fanadinam-panjakana izany. Farany, tsy manao ambanin-javatra ireo tantsaha ny FIASA ka miezaka manampy azy ireo amin'ny fiahiana ara-tsosialy ka misy ny fananganana karazana ombona sy tahiry hanangonana latsakemboka handoavana fisotroan-dronono rahatrizay.